IkhayaUMHLABAEuropeanI-38 UkraineIzinkampani Zakwaloliwe Ezizimele Zokuqala i-Expeditions e-Ukraine
Izinkampani Zakwaloliwe Ezizimele Zokuqala i-Expeditions e-Ukraine
15 / 09 / 2019 Levent Elmastaş I-38 Ukraine, European, UMHLABA, sesitimela, JIKELELE, HEADLINE 0
izinkampani ezizimele zesitimela e-Ukraine ukuqala izindiza
Ngokusho kukaNgqongqoshe Wezingqalasizinda wase-Ukraine uVladislav Krikliy, uhulumeni wase-Ukraine uhlela ukwethula iphrojekthi yokushayela izinkampani ezizimele esiteshini sesitimela kuze kube sekupheleni kwe2019.
I-Ik Sinenhloso yokufisa: ukwenza iphrojekthi yokushayela izindiza ezikhethekile ngasekupheleni konyaka, uKr uthe Krikliy.
Iphrojekthi izoba ngumshayeli wezindiza futhi izosebenzela ukuthutha impahla manje. Ukwethulwa okukhulu kwezimali zokuhlinzekwa kwezinkampani ezizimele eziteshini zikaloliwe akukaze kuxoxwe ngakho.
Irse Lokhu ngeke kube yiqiniso uma zonke izindawo ezinenzuzo zinikezwa izinkampani ezinkulu. Kodwa-ke, ukudonswa okukhethekile kuhle ngoba eminyakeni yamuva nje ama-Railways ase-Ukraine awakwazanga ukunika umkhondo owanele. ”
NgokukaKrikliy, imigqa lapho kuzosebenza khona izinhlwathi ezikhethekile ayikakaziswa kuze kube manje. Izinketho eziningana ziyabhekwa.
Inkampani okuyiyo kuphela enelungelo lokuhamba ngezitimela e-Ukraine i-Ukraine State Railways Ukrzaliznytsia. Bekuthiwa uma izinkampani ezizimele ziqala ukuthutha izitimela e-Ukraine, zizobeka ezazo izintengo, kepha umbuso kufanele uqondanise imigqa ezosebenza kuyo.
I-Elvan: Isikhumulo sezindiza sase-Ordu-Giresun sizoqala izindiza ezihleliwe esikhathini sokuqala sonyaka 06 / 02 / 2015 Elvan: Ordu-Giresun Airport Engxenyeni yokuqala başlayacak.ulaştır okuhleliwe kulo nyaka, Wezindaba kanye nokuxhumana UNgqongqoshe Maritime Lutfi Elvan, okokuqala elwandle, wathi yamathebhu nge ukwenza Ordu-Giresun Airport usuphothuliwe ekupheleni Mashi eTurkey. U-Elvan, insimu izoqala izindiza ezihleliwe engxenyeni yokuqala yonyaka, esho. UNgqongqoshe uLütfi Elvan wenza ukufika kokuqala esigabeni esigcwalisiwe somgwaqo ngemuva kokwenza uphenyo ekwakhiweni kwesibhuloho esiphezulu nesiphephelo nge-helicopter eyithwele. UNgqongqoshe u-Elvan Governor Irfan Balkanlıoğlu nezinye izikhulu zamukele iMpi. Ngemva kokuhlangana endaweni yokulinda endaweni yemoto elinde indawo yokugcwalisa kanye nophenyo luka-Elvan, lenze isitatimende mayelana nesibhuloho. I-kendileri yanamuhla
I-22 ekhilomitha ye-Kadikoy-Kartal yomshuwalense i-17 izoqala izindiza ngo-Agasti 08 / 08 / 2012 Ukutshala izimali ezisemgwaqeni omkhulu emlandweni weRiphablikhi kuvulwa. Ngokuhamba kwesikhathi irekhodi, ophela esheshayo igodi Umhubhe isihloko wezwe 22 ikhilomitha Kadikoy-Kartal kaMasipala 17 Agasti uzoqala kanye zokuthutha Istanbul ezibaluleke kakhulu njengomunye woFakazi iphrojekthi waqala ukwakhiwa e 2008 Kadikoy-Kartal kaMasipala kwamarekhodi izifundo igcwaliswe bese isikhashana edlule ezingeni. Njengoba umhubhe ogwadule kakhulu emhlabeni wonke, izindlela ezibaluleke kakhulu zokuthutha ohlangothini lwe-Anatolian zizofakwa enkonzweni. Umzila weKadıköy-Kartal we-22 wekhilomitha, ohlome imishini yobuchwepheshe, uzophatha abagibeli abayizigidi ze-1-1.5 ngosuku. I-2013 kulindeleke ukuthi ingenele ekupheleni konyaka ...
I-Bursa T1 i-tram line izoqala ukusebenza ngo-Septhemba 25 / 05 / 2013 I-Bursa T1 line tram izoqala izindiza eMeya kaMsombuluko weMasipala waseBursa uMasipala weRecep Altepe, T1 umsebenzi wokwakha umgwaqo usuphelile, okubonisa ukuthi ukuphela kukaJuni ukuhamba kwecala, ukuvulwa kwezikole, kusho uhambo lwe-tram. Ama-Rails afakwe kulayini lwe-1 futhi umsebenzi wagcwaliswa. UMeya u-Recep Altepe, ekubukeni kwakhe kwe-Atatürk Street, uveze ukuthi umsebenzi wokwakha usuzophela, ukuhlolwa kwemigomo ngoJuni, ukuvulwa kwezikole kwamemezela ukuqala kohambo. UMeya u-Altepe uthe iBursa ishintshe igobolondo layo futhi ithathe izinyathelo eziqinile zokuba idolobha lanamuhla.
I-Bursa Airlines 3 izoqala izindiza phakathi nenyanga 14 / 08 / 2013 I-Bursa Airlines 3 izoqala izindiza phakathi nenyanga: UMeya uRecep Altepe umemezele ukuthi iBursa Airlines (BHY), eyasungulwa nguMasipala waseBursa, izoqala izindiza ze-3 ngesikhathi sakamuva. I-AK Party yenhlangano yesifundazwe, i-Merinos Atatürk Congress Cultural Center i-Grand Terrace'ta imikhosi yemikhosi. IPhini likaNdunankulu u-Bulent Arinc, iMeya I-Recep Altepe, izikhulu zaseBursa u-Onder Matli, u-Ismail Aydin, u-Hakan Cavusoglu, uKemal Serbetcioglu, u-Ismet Su, uTulin Erkal Kara, uChanan Candemir Celik noBedrettin Yildirim , I-23. Amalungu ePhalamende, iMeya kaMasipala, iSivil yabantu
Izitimela zase-Istanbul-Adapazari zizoqala izindiza ngaphambi konyaka omusha 02 / 08 / 2014 Istanbul-Adapazari izitimela uzoqala kusukela esikhathini ngaphambi Christmas: Isayensi, Industry and Technology uNgqongqoshe Fikri uthe Isitimela somhambi uhambo lomkhumbi uzoqala ngaphambi Christmas Khanyisa esithangamini nabezindaba. UNgqongqoshe Intellectual Khanyisa Kocaeli, esithangamini nabezindaba wanikeza ukwaziswa ngokuphathelene amaphrojekthi zokuthutha. Istanbul-Adapazari umugqa e zwi abaqhubeke umsebenzi mkhosi ngoba the train lwabagibeli ukusebenza Khanyisa, 8 nsuku mutual ukuze usethe umugqa somhambi uzokwenza isikhathi, wathi abagibeli okungenani 1000 ezosebenza izitimela, "le suburban izitimela uzoqala ngaphambi Christmas," esho. Izikhonzi Khanyisa, kule nyanga ukuthi ukuhlungwa kwaleli thenda North Marmara Motorway ngokuba Black Sea sokulungiselela thandanani komgwaqo ukuze kwakhiwe e Kaynarca-Agva ogwini ...
I-Altınordu Intercity Bus terminal Imisebenzi Yokwakhiwa Kwaqala
Ukuqala Kokwakhiwa Kwe-Viaduct eCarinth yaseKarakoyun
I-Elvan: Isikhumulo sezindiza sase-Ordu-Giresun sizoqala izindiza ezihleliwe esikhathini sokuqala sonyaka
I-22 ekhilomitha ye-Kadikoy-Kartal yomshuwalense i-17 izoqala izindiza ngo-Agasti
I-Bursa T1 i-tram line izoqala ukusebenza ngo-Septhemba
I-Bursa Airlines 3 izoqala izindiza phakathi nenyanga
Izitimela zase-Istanbul-Adapazari zizoqala izindiza ngaphambi konyaka omusha
Isitimela se-Euro-2012 sase-Ukraine, Road and Airline Infrastructure Preparations.
Izinkampani ZaseSlovak Railway e-Ankara
Isitimela esisheshayo e-Ukraine sasikhululekile kwi-VAT
I-Limak ibonisa isivumelwano se-224 million esakhiwa ngaphansi komhlaba e-Ukraine